Mapurisa anovhura moto panguva yemhirizhonga yekurwisa-kuvhara muRotterdam, vanomwe vakakuvara
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Netherlands Kuputsa Nhau » Mapurisa anovhura moto panguva yemhirizhonga yekurwisa-kuvhara muRotterdam, vanomwe vakakuvara
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
7 vakakuvara apo mapurisa akavhura pfuti panguva yemhirizhonga yekurwisa-kuvhara muRotterdam.
Zviremera zveRotterdam zvakapa chimbichimbi kurambidza vanhu kuungana munzvimbo iyi "kuchengetedza runyararo", ukuwo chiteshi chechitima chikuru chakavharwa.
Vanhu vanomwe vakakuvara pakuratidzira vachipikisa Netharenzi' ichangoburwa COVID-19 zvirambidzo zvakashanduka kuita mhirizhonga mudhorobha reRotterdam, izvo zvaita kuti mapurisa apfure vanhu vairatidzira.
Sezvo varwi vemhirizhonga vaimhanya nepakati pezvitoro zveguta rechiteshi, vachiisa moto nekukanda matombo nemafirework kumapurisa, izvo zvakanzi nameya weguta reDutch "mhirizhonga yemhirizhonga".
reRotterdamMeya Ahmed Aboutaleb akataura mumaawa eMugovera mangwanani kuti "nguva dzakawanda mapurisa aiona zvakakodzera kutora zvombo zvavo kuti vazvidzivirire".
"[Mapurisa] akapfura varatidziri, vanhu vakakuvara," akadaro Aboutaleb. Akanga asina tsanangudzo pamusoro pekukuvara. Mapurisa akaridzawo pfuti dzekunyevera.
Mapurisa akataura mukutaura kuti kuratidzira kwatanga mumugwagwa weCoolsingel "kwakonzera mhirizhonga. Moto wakabatidzwa munzvimbo dzakawanda. Mafirework akaridzwa uye mapurisa akaridza pfuti dzakawanda dzekunyevera”.
"Pane maronda ane chekuita nepfuti," mapurisa akawedzera.
Mapurisa akati wandei akakuvadzwawo mumhirizhonga uye mapurisa akasunga vanhu vakawanda uye vanotarisira kusunga vakawanda mushure mekudzidza mavhidhiyo kubva kumakamera ekuchengetedza, akadaro Aboutaleb.
Mamiriro ezvinhu akanga ambodzikama pave paya, asi pakanga pakazara mapurisa.
Mapurisa echiDutch akati zvikamu kubva kutenderera nyika zvakaunzwa "kudzosa kurongeka" kuguta.
Kuratidzira kwakarongwa nhasi muAmsterdam vachipokana neCCIDID-19 curbs kwakadzimwa mushure memhirizhonga muRotterdam.
Yakanga iri imwe yemhirizhonga yakaipisisa yakaitika mu Netharenzi sezvo zvirambidzo zve coronavirus zvakatanga kuiswa gore rapfuura. Muna Ndira, mhirizhonga yakarwisawo mapurisa ndokupisa moto mumigwagwa yeRotterdam mushure mekunge mutemo wakadzikwa.
Netherlands yakadzokera kumadokero kweEurope yekutanga kuvharika kwemwaka wechando svondo rapfuura. Zvirambidzo, izvo zvinobata maresitorendi, zvitoro nemitambo, zvinotarisirwa kuramba zvichishanda kweanoda kusvika mavhiki matatu.
The Netharenzi iri kuyedza kudzora mafungu matsva ekoronavirus, iine nyaya nyowani dzinodarika zviuru makumi maviri neshanu dzakataurwa nezuro.
Hurumende yeDutch yave kufunga kusabvisa vasina kubayiwa kubva kumabhawa nemaresitorendi, vachibvumidza kupinda kune avo vakabaiwa zvizere kana vakapora kubva kuchirwere.